ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်ကြိုက်သူတွေအတွက် အရသာလည်းကောင်းစျေးနှုန်းလည်းချိုသာတဲ့ Spicy Taste…. – FoodiesNavi
ပါဝင်တဲ့ပမာဏများပြားပြီး ? ? စျေးနှုန်းလည်းအရမ်းတန် အရသာလည်းအရမ်းရှိတာကြောင့် ? ? Review ကောင်းတွေအများကြီးရထားတဲ့ မာလာရှမ်းကောဆိုင်လေးအကြောင်းကို Foodies Navi ကနေပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ?? ?? ဒီဆိုင်လေးကတော့ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ ကန်သာယာစင်တာ ပထမထပ်မှာရှိတဲ့ The Spicy Taste ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ? ? ဒီဆိုင်လေးမှာတော့ ? ? မာလာရှမ်းကောအပြင် ? ? ? ဂုံးချဉ်စပ် ၊ ဂဏန်းမာလာချဉ်စပ် ၊ ကင်းမွန်ချဉ်စပ် ၊ ကြက်ခြေထောက်ချဉ်စပ်ဟင်းရည် ၊ ဖျော်ရည်မျိုးစုံစတာတွေကိုရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? ?
အခုတလောလူကြိုက်အရမ်းများနေတဲ့ ? ? စပ်စပ်ထုံထုံမာလာရှမ်းကောကို ? ? ? အသားလုံး ၊ အရွက်အသီးစုံစုံလင်လင်နဲ့စိုစိုပြေပြေလေး ချက်ပြုတ်ထားတာကြောင့် ? ? အစပ်အဟပ်တည့်ပြီး ? ? လျှာထိပ်ဖျားမှာအထုံအရသာလေး စွဲကျန်ရစ်နေတာကြောင့် Spicy Taste ရဲ့ မာလာရှမ်းကောကိုထပ်ကာတလဲလဲစားချင်လာအောင် ? ? ခံတွင်းရဲ့ဆန္ဒကိုစွဲညို့ထားစေနိုင်ပါတယ်။ ? ? အသားလုံးတွေအများကြီးပါဝင်ပြီး အသားလုံးကိုဖိကိုက်လိုက်လို့ ယိုစိမ့်ပေါက်ထွက်လာတဲ့အရသာရည်လေးတွေကိုလည်း ? ? လျှာပေါ်မှာဝဲပျံနေစေပါတယ်။ ? ? မာလာရှမ်းကောကိုတစ်ပွဲချင်းမှာစားလို့ရသလို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အမည်တွေရွေးချယ်ပြီး ကျသလောက်ရှင်းစနစ်နဲ့လည်း သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ?? ??
? ? ကြေးအိုးပွဲတိုင်းမှာလည်း လတ်ဆတ်တဲ့အသားတွေ ? ? ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုသာ ? ? အသုံးပြုထားတာကြောင့် သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်နေပြီး အရသာဖန်တီးထားမှုဟာလည်း အပိုအလိုမရှိဘဲစားဖူးသူတိုင်း စိတ်ကြိုက်တွေ့စေမယ့် ? ? အရသာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဂုံးချဉ်စပ် ၊ ဂဏန်းမာလာချဉ်စပ် ၊ ကင်းမွန်ချဉ်စပ်တွေဟာလည်း ပင်လယ်အငွေ့အသက်တွေခံစားရရှိလောက်အောင် လတ်ဆတ်ကောင်းမွန်ပြီး အချဉ်အစပ်ကိုမှခံတွင်းတွေ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ ? ? စားသုံးသူတွေအတွက်လုံးဝအဆင်ပြေစေမှာပါ။ ?? ?? ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့– ⏰ ⏰ မနက်(၉)နာရီကနေ ည(၉)နာရီအထိပဲဖြစ်ပါတယ်။
Image Source : www.facebook.com/thespicytaste
In Restaurant Guides Tagged Crab Chin Sat, Gone Chin Sat, mala shan kaw Leaveacomment